posted Aug 11, 2015, 2:45 AM by Myanmar Signis [ updated Aug 11, 2015, 4:19 AM ]
ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသော ခရစ်တော်၏ အသက်ပေးကျေးဇူးတော်သည် သင်တို့အပေါ် စုံလင်ပြည့်ဝစွာ သက်ရောက် တော်မူပါစေကြောင်း ဦးစွာနှုတ်ခွန်းဆက် ဆန္ဒပြုပါတယ်။
ပါစကားကာလမှာအပေါ်လွင်ဆုံးကြွေးကြော်သံက“အာလေလုယာ” ဆိုတဲ့ ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ခြင်း တေးသီချင်းသံဖြစ်ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်က ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းကြပါစို့ ဖြစ်ပါတယ်။ လူသားတစ်ဦး အတွက် အမြင့်မြတ်ဆုံး က ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းနိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အမိမြန်မာပြည်မှာ အလွန်လှပတဲ့ ချစ်စရာဓလေ့စရိုက်က ဘာသာရေးကို တန်ဘိုးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မြို့တိုင်းရွာတိုင်းမှာ ဘာသာပေါင်းစုံရဲ့ ဘုရားဝတ်ပြုသံ၊ ဆုတောင်းသံတွေ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြည့်လျှံနေပါတယ်။လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဆိုတာကိုအမြင့်မြတ်ဆုံးသောဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်အတိုင်းကျင့်ကြံနေထိုင်ခြင်းအားဖြင့်သာရရှိနိုင်ပါတယ်။
“လူသားဆိုတာမှားတတ်တယ်၊ဘုရားကအခွင့်လွှတ်တယ်”မှားတတ်တဲ့ လူသားတွေဟာ မြင့်မြတ်သော ဂုဏ်သိက္ခာရှိဖို့ ဆိုရင် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ခွင့်လွှတ်ခြင်းအားဖြင့် ကျေအေးပြီး သင့်မြတ်စွာနေထိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဦးဆုံးအနေနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဘုရားသခင်နဲ့ ကျေအေးသင့်မြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ “သင်တို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် ပြန်လည် ကျေအေးသင့်မြတ်ကြလော့”(၂ကော်၅း၂၀)သံပေါလူးကမှာကြားခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာမေတ္တာတော်အရှင် ခွင့်လွှတ်ခြင်း သဘောနဲ့ပြည့်ဝတဲ့သခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အပြစ်သားကျွန်ုပ်တို့ကိုပြန်လည်လက်ခံခဲ့တယ်။သေခြင်းကိုအောင်မြင်တဲ့ခရစ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကပြန်လည်ကျေအေးသင့်မြတ်ခြင်းကိုအမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးပေးပြီးအရင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဘုရားရှင်ကအခွင့်လွှတ်ဖို့မမောမပန်းပါဘူး။ကျွန်ုပ်တို့လူသားများကသာမကောင်းမှုဒုစရိုက်ထဲကနေမထွက်ချင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုမတောင်းခံသလို၊ကိုယ်တိုင်ကလည်းအခွင့်မလွှတ်နိုင်ခြင်းတွေနဲ့ ဘုရားနဲ့ဝေးကွာနေသလို လူသားများနဲ့ လည်း ဝေးကွာ နေတတ် ပါတယ်။ ကိုယ်ပဲအကျဉ်းသားဖြစ်နေရပါတယ်။
တဲ့ဘ၀ကိုပြန်ကြည့်ရင်ကိုယ်ကသူတစ်ပါးအပေါ်မှားတာရှိသလို၊သူတပါးက ကိုယ့်အပေါ် မှားခဲ့ တာတွေ ရှိကြပါတယ်။ မှားခဲ့တဲ့အမှားတွေထဲမှာ ဆက်မနေကြဘဲ ပြန်လည်ထွက်လာကြဖို့ ကျွန်ုပ် ဖိတ်ခေါ်ချင် ပါတယ်။ အမှားတစ်ခုကပိုပြီးကြီးလေကျေးအေးသင့်မြတ်ခြင်းလုပ်ဖို့ကလည်းပိုပြီးခက်ခဲလေဖြစ်ပါတယ်။မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့ဟာရှေ့ဆက်လျှောက်နိုင်ဖို့၊တိုးတက်နိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်လွှတ်ခြင်း၊ပြန်လည်ကျေအေးသင့်မြတ်ခြင်းက လွဲပြီး အခြားနည်းလမ်း မရှိပါဘူး။တစ်ဦးနဲ့တစ်ယောက်အပေါ် အပြန်အလှန်ဖြစ်နေတဲ့ သံသယစိတ်တွေကို ချေဖျက်နိုင်မှသာ ငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင် နိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။
န်မာနိုင်ငံတော်ဟာလည်းအတိတ်ဆိုးကို ထားခဲ့ပြီးငြိမ်းချမ်းတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက် ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးကို ပထမဦးစားပေးအနေနဲ့ ဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ကြားမှာ ရှိနေတဲ့ ရန်ငြိုးတွေကို သင်ပုန်းချေပြီး ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ကြရမယ်၊ အဲဒီနောက်မှာမှ သင့်မြတ်စွာ ငြိမ်းချမ်းအတူ နေထိုင်နိုင်ပြီး တိုင်းသူ ပြည်သားတစ်ဦးစီတိုင်းအတွက် သာယာဝပြောသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ် တည်ဆောက်နိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။
ပြန်လည်ကျေအေးသင့်မြတ်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှု ဆောက်တည်ရာမှာ တစ်ဦးစီတိုင်းက စစ်မှန်သော အကျင့်ပြောင်းလဲခြင်း ရှိမှသာ ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မှားတဲ့သူဟာ အမှားထဲဆက်နေနေသရွေ့ အကောင်းဖက်ကို မျက်နှာ မမူနိုင်သရွေ့ ကျေအေးသင့်မြတ်ခြင်းကို ဆောက်တည်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မှားတဲ့သူဟာ မိမိမှားနေတယ်ဆိုတာ သိမှတ် လက်ခံပြီး အမှန်ဖက်ကို ရဲ့ဝံ့စွာ ပြောင်းလဲဖို့လိုပါတယ်။ အမှားခံခဲ့ရတဲ့ သူဖက်ကလည်း သဘောထားကြီးစွာနဲ့ အခွင့်လွှတ် ပေးနိုင်ရပါ့မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ လူသားအားလုံးဟာ မှားတတ်သူတွေဖြစ်တယ်၊ ထိခိုက်နာကျဉ် လွယ်သူတွေဖြစ်တယ် ဆိုတာ အပြန်အလှန်အသိအမှတ်ပြုပေးနိုင်ကြ မယ်ဆိုရင်အခွင့်လွှတ်နိုင်စွမ်းရှိလာလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ကျင်းပနေကြတဲ့ခရစ်တော်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ခြင်းပွဲတော်ရဲ့သတင်းစကားကဒီအချက်ကိုမီးမောင်းထိုးပြနေပါတယ်။အပြစ်တရားကိုအနိုင်ယူတယ်၊အပြစ်အမှားရဲ့ကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့လည်းလမ်းမှားထဲကနေရုန်းထကြဖို့အားပေးနှိုးဆော်ပါတယ်။အပြစ်အမှားကိုဆက်လက်တွယ်ဖက်မနေကြပါနဲ့တော့။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အတ္တတရားတွေ၊ရန်ညှိုးအာဃာတတွေ၊ အမုန်းတရားတွေရဲ့ နှောင်ဖွဲ့မှုကနေ အမိမြန်မာပြည်ကို လွတ်မြောက်စေကြပါစို့။ လောဘ၊ ဒေါသ၊ အတ္တအမှောင်တွေဖုံးအုပ်ပြီး အပြစ်နဲ့မုန်းတီးခြင်းတွေကို တွယ်ဖက်ထားမယ်ဆိုရင် ကျွန်ုပ်တို့ဟာ သေခြင်းရဲ့ လွှမ်းမိုးမှု အောက်မှာသာ ရှိနေကြလိမ့်မယ်။ ရှင်ပြန်ခြင်းဆိုတာကိုခံစားနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားတွေကို ချက်ခြင်းပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာ ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပါ။ နေသားကျနေတဲ့ အမှားတွင်း ထဲက ထွက်လာဖို့ဆိုတာ ကျွန်ုပ်တို့ခွန်အားနဲ့ပဲ မရနိုင်ပါဘူး။ ဘုရားသခင်ရဲ့ကူညီမှုကိုရယူဖို့လိုပါတယ်။
“ငါသည်လည်းညီညွတ်သောစိတ်နှလုံးနှင့်အသစ်သောသဘောကိုသွင်းပေးမည်။သူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲကကျောက်နှလုံးကိုနှုတ်၍အသားနှလုံးကိုပေးသောကြောင့်သူတို့သည်ငါစီရင်ထုံးဖွဲ့သောပညစ်တရားလမ်းသို့လိုက်၍စောင့်ရှောက်သဖြင့်ငါ၏လူဖြစ်ကြလိမ့်မည်၊ငါသည်လည်းသူတို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်မည်။” (ယေဇကျေလ၁၁း၁၉ -၂၀) အဲဒါကြောင့် ဘုရားရှင်ထံတော်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မာကြောနေတဲ့စိတ်နှလုံးသားတွေကိုပြုပြင်ပေးဖို့ကျေးဇူးတော်တောင်းခံကြပါစို့။
သနားဂရုဏာပွါးတတ်ခြင်းက လူသားတစ်ယောက်ကို မြင့်မြတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်စေပါတယ်။သနားကြင်နာတတ်ခြင်း မရှိ တော့ဘူးဆိုရင် လူဟာရိုင်းစိုင်းတဲ့တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ထက်တောင် ပိုဆိုးဝါးပါလိမ့်မယ်။ လူတိုင်းရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ငဲ့ညှာ သနားတတ်တဲ့စိတ်ကိုမွေးမြူကြဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒီသနားကြင်နာတတ်တဲ့ စိတ်သဘေားထားဟာ ကျွန်ုပ်တို့လူသားတွေကို မြင့်မြတ်သူတွေဖြစ်စေပါတယ်။
“သင်တို့၏အဖ ခမည်းတော်သည် သနားကြင်နာတော်မူသည့်နည်းတူ သင်တို့သည်လည်း သနားကြင်နာခြင်းရှိကြလော့။” (လုကာ ၆း၃၆)
ဘုရားသခင်ဟာ အလွန်သနားကြင်နာတတ်တဲ့ အရှင်သခင် ဖြစ်တော်မူတယ် ဆိုတာကို ကျွန်ုပ်တို့ သံသယဖြစ်စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ အထူးသဖြင့် သူ့ရဲ့အပြစ်ခွင့်လွှတ်တတ်တဲ့သဘောကို သမ္မာကျမ်းစာတော်မှာ အထင်အရှား တွေ့နိုင် ပါတယ်။ “သင်တို့၏ အပြစ်သည် နီသော အဆင်းရှိသော်လည်း မိုးပွင့်ကဲသို့ဖြူလိမ့်မည်၊ ကတ္တပါနီနှင့်အမျှ နီသော်လည်း သိုးမွှေးကဲ့သို့ ဖြူလိမ့်မည်။” (ဟေရှာယ ၁း၁၈)
“ငါသည် အသက်ရှင်သည်အတိုင်း ဆိုးသောသူသည် အသေခံခြင်းအမှုကို ငါနှစ်သက်သည်မဟုတ်၊ ဆိုးသောလမ်းမှ လွှဲ၍ အသက်ရှင်ခြင်းအမှုကိုငါနှစ်သက်၏။ အို အစ္စရာအဲလ် အမျိုးသားတို့ သင်တို့လိုက်သော လမ်းဆိုးမှ လွှဲကြလော့။ နောင်တ ရကြလော့ အဘယ့်ကြောင့် အသေခံလိုကြသနည်း” (ယေဇကျေလ ၃၃း၁၁)
ဘုရားသခင်ရဲ့သနားကြင်နာခြင်းကို အမိအသင်းတော်မှ အစဉ်လိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားသခင်ဟာ မှားယွင်း သူများ ကို အခွင့်လွှတ်လက်ခံသလို အသင်းတော်ကလည်း လက်ခံနေပါတယ်။ ပုပ်ရမင်းကြီး ဖရန်စစ်က ‘ဒီဇင်ဘာလ၊ (၈)ရက်၊ ၂၀၁၅ခုနှစ် ကနေနိုဝင်ဘာ(၂၀)ရက်၂၀၁၆ခုနှစ်အထိ’ တစ်နှစ်တာကာကလကို “သနားကြင်နာခြင်း၏ဂျူဘီလီ” အဖြစ် သတ်မှတ် ကျင်းပမယ်လို့ မတ်လ(၁၃)ရက်နေ့ကကြေငြာခဲ့ပါတယ်။
သနားကြင်နာသောရဟန်းမင်းကြီးလို့ ဘွဲ့နာမပေးခံရတဲ့ရဟန်းမင်းကြီးကအခုချိန်ကာလဟာ“သနားခြင်းကာလရာသီ” ဖြစ်ပါ တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။သူဒီလိုမိန့်ဆိုခဲ့တဲ့အဓိကအကြောင်းအရင်းကဘုရားသခင်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
“If the Lord never tires of forgiving, we have no other choice ... The Church is the mother, and she must travel this path of mercy. And findaform of mercy for all.”
“ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကမမောမပန်းအခွင့်လွှတ်နေရင်ကျွန်ုပ်တို့မှာရွေးချယ်စရာအခြားလမ်းမရှိတော့ပါဘူး... အသင်းတော် ဟာ မိခင်တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့အတွက် သနားခြင်း လမ်းစဉ်ကိုပဲ လျှောက်လှမ်း ရမှာပါ။ အားလုံးအတွက် အကျုံးဝင်တဲ့ သနားကြင်နာခြင်းကို ပုံဖေါ်ပေးရပါလိမ့်မယ်။”
အမိအသင်းတော်ဟာမည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှထာဝရပျက်စီးခြင်းအတွက်မစီရင်ပါဘူး။ရိုးသားတဲ့နှလုံးသားနဲ့တောင်းခံသူတိုင်းကိုဘုရားသခင်မေတ္တာတော်ရဲ့ ကုသခြင်းကျေးဇူးကို သွန်းလောင်းပေးပါတယ်။ အမိအသင်းတော်ဟာ အတားအဆီး တံတိုင်းတွေကို ကျော်လွန်ပြီး အဝေးရောက်လေလွင့်နေသူတွေ၊ အသိုင်းအဝိုင်းက ပယ်ထားခံရသူတွေကို ရှာဖွေနေဦးမှာပါ။ လူတိုင်းကို လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို အစဉ်ဖေါ်ဆောင်ပေးနေမှာပါ။
ရဟန်းမင်းကြီးက ဘုရားသခင်ရဲ့ အခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အပြစ်ဖြေပေးတဲ့ ရဟန်းဘုန်းတော်ကြီးများကို မိန့်မှာခဲ့ ပါသေးတယ်။ “သင်ဟာအပြစ်ဖြေသူဖြစ်စေ၊ အပြစ်ကိုဖြေပေးသူဖြစ်စေ ဒီတစ်ချက်ကို ဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့၊ အဲ့ဒါက ဘုရားသခင် အခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့ အပြစ်ဆိုတာ လုံးဝမရှိပါဘူး”
အခွင့်လွှတ်တတ်ခြင်း၊ သနားကြင်နာတတ်ခြင်းများဖြင့် အဖခမည်းတော်ရဲ့ သားသမီးကောင်းများအဖြစ် သက်သေခံကြပါစို့။
အမိမြန်မာပြည်ဟာ အလွန်သနားစရာကောင်းတဲ့ အနေအထားမှာ ရှိနေပါတယ်။ စစ်ဘေးဒဏ်ကြောင့် ပြေးလွှားနေရတဲ့ လူမမယ်ကလေးငယ်တွေ၊ မိသားစုနဲ့ခွဲခွါပြီး အခြားနိုင်ငံမှာ ခေတ်သစ်ကျွန်ဖြစ်နေရသူတွေ၊ တရားမျှတမှုမရှိလို့ အနိုင်ကျင့်ခံနေရတဲ့လယ်သမား၊ အလုပ်သမားတွေ၊ တရားဥပဒေရဲ့ ကာကွယ်မှုကို မရရှိဘဲ အနိုင်ကျင့်ခံနေရတဲ့ ပညာမတတ်ဆင်းရဲသားလူတန်းစားတွေ၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွါးရေး မတည်ငြိမ်မှုတွေကြားမှာ သောကရောက်နေရတဲ့လူငယ်တွေ၊ ခေတ်စနစ်ပြောင်းလဲခြင်းရဲ့ ထိုးနှက်မှုအောက်မှာ အကာအကွယ်မဲ့စွာ သားကောင်ဖြစ်နေရသူတွေ စတဲ့ သနားစရာ ကျွန်ုပ်တို့ နိုင်ငံသားတွေကို ကူညီကယ်တင်ဖို့ ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားထဲက သနားဂရုဏာ စိတ်ထားမွေးဖွါးကြပါစို့။ ပိုပြီး သနားဖို့ကောင်းတဲ့လူတွေကတော့ သူတပါးအပေါ် မတရားနိုင်ထက်စီးနင်းပြုလုပ်ပြီး အကြောက် တရားနဲ့ နေ နေကြရတဲ့ လောဘသားစီပွါးရေး သမားတွေ၊ အာဏာကို ချုပ်ထားလိုသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကိုလည်းသနားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့။
ယခုနှစ်ရဲ့ပါစကားပွဲတော်ဟာ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက် အလွန်ထူးမြတ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်က အစိုးရနဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေ ကြားတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူမူကြမ်းကို သမ္မတကြီးက လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီဆိုတာကြားသိရပါတယ်။ သေနတ်သံတွေတိတ်ဆိတ်တော့မယ်၊ စစ်ပွဲတွေ ရပ်တန့်သွားတော့မယ် ဆိုတာ မင်္ဂလာတစ်ပါးပါပဲ။
ပါးစကားပွဲတော်မှာ ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ခြင်း သတင်းကောင်းဟာ လက်တွေ့ဖြစ်လာတော့မယ်။ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေထဲမှာ ထောင်ပေါင်းများစွာသော လူတွေဟာ သင်္ချိုင်းထဲမှာနေရသလို နှစ်ပေါင်းများစွာ လှောင်ပိတ် ခံနေကြရတယ်။ ပြန်လည် သင့်မြတ်ခြင်းနဲ့သနားကြင်နာခြင်းရဲ့ တမန်တော်က “ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ပြီ”ဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုဆောင်ယူခဲ့ပါပြီ။ စစ်ဘေး ဒုက္ခသည်တွေဟာ ကြင်နာမှုကင်းတဲ့ စခန်းတွေကနေ လွတ်မြောက်ကြပါတော့မယ်။
ဒါပေမယ့် မကောင်းဆိုးဝါးဆိုတာ လွယ်လွယ်နဲ့ အရှုံးမပေးတတ်ဘူး။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲခြင်းဟာ တရားမျှတမှုအပေါ် အခြေခံတဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းကို ဖေါ်ဆောင်ပေးရမယ်။ တချိန်တုန်းက ရယူခဲ့တဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကတော့ နာကြည်းစရာ ကောင်းပါတယ်။အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာနိုင်ငံတော်လက်နက်ကိုင်အပါဝင်တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တွေကြောင့် နိုင်ငံတော်ရဲ့သစ်တောတွေ၊ အဖိုးတန်တွင်းထွက်သယံဇာတတွေ၊ ပြည်သူတွေရဲ့ရတနာတွေ အလုခံခဲ့ရတယ်၊ အခိုးခံခဲ့ရတယ်။
တိုင်းသူပြည်သားတွေကို ဆင်းရဲခြင်းသင်္ချိုင်းထဲ နောက်ထပ် တွန်းမချကြပါနဲ့တော့။ တိုင်းပြည်ရဲ့ သယံဇာတတွေကို နိုင်ငံတကာ လုယက်သူတွေလက်ထဲ ထိုးမအပ်ပါနဲ့တော့။ ရွှေကိုငမ်းငမ်းတက်လိုချင်နေတဲ့ သူတွေရဲ့ လက်ထဲကနေ လူသားများရဲ့ မိခင်ဖြစ်တဲ့ ဧရာဝတီကို ကယ်တင်ကြပါ၊ အမိမြန်မာနိုင်ငံဟာ ဖိနှိပ်ခံရခြင်း၊ အမြတ်ထုတ်ခံရခြင်း ဆိုတဲ့ သင်္ချိုင်းထဲမှာ နှစ်ပေါင်း၆၀နီးပါး ပိတ်လှောင်ခံခဲ့ရပြီးပါပြီ။ အခုချိန်မှာ ငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့ တိုးတက်ခြင်းအတွက် ပြန်လည် ရှင်သန်ခွင့်ပေးပါလို့တောင်းခံပါရစေ။မြန်မာနိုင်ငံဟာအသစ်သောအသက်တာဖြင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပါစေ၊ လူအားလုံးအတွက် အလင်းရောင်ထွန်းလင်းပါစေ။
သနားဂရုဏာပွါးခြင်းဆိုတာတရားမျှတမှု ဆိုတာထက် ကျော်လွန်တယ်၊ မတူညီတာတွေကို ကျော်မြင်တယ်။ လူမျိုးမတူခြင်း၊ အသားအရောင်မတူခြင်း၊ ကိုးကွယ်ရာဘာသာမတူခြင်း စတဲ့မတူညီခြင်းတွေကို မမြင်တော့ဘဲ အကူညီလိုသူ၊ သနားစရာ ကောင်းသူ တစ်ဦးအဖြစ်သာမြင်ပါတော့တယ်။
အထူးသဖြင့် တပါးသူကို ကိုယ့် ညီ၊ ညီမ၊ အစ်ကို၊ အစ်မတွေလို၊ ကိုယ့်မိသားစုဝင် ညီအစ်ကိုမောင်နှမအရင်းအချာတွေလို မြင်ကြရအောင်။
အမျိုး၊ ဘာသာ မခွဲခြားဘဲ အပြန်အလှန်လက်ခံတတ်တဲ့စိတ်သဘောထား၊ တစ်ဖက်စွန်းမရောက်တဲ့သည်းခံခြင်းတရားတွေနဲ့ မေတ္တာတော် တည်ဆောက်ကြရအောင်။
ညီအစ်ကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ ခရစ်တော်ဟာ အပြစ်နဲ့သေခြင်းကို ချေဖျက်ခဲ့ပါပြီ၊ သနားခြင်းစိတ်ထားများနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်ကို ပြောင်းလဲပြီးနိုင်ငံသားကောင်းများအဖြစ်နဲ့ လှပသောလူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို ဆောက်တည်ကြပါစို့။
ရှင်ပြန်သောခရစ်တော်၏ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် သားသမီးများအာလုံး မကောင်းမှုအပေါင်းမှ လွတ်ကင်းနိုင်ကြပါစေ...
၅ ရက် ဧပြီလ ၂၀၁၅ ခုနှစ်